Ukudibana kombala wasekhaya
I-wrongcops.com yeyona webhusayithi ibonelela ngolwazi malunga nokuqulunqwa kwemibala ngaphakathi komfanekiso ngokuzenzekelayo nje ukuba uyilayishe kwisixhobo sokukhetha imibala. Le webhusayithi inemibala engaphezulu kwama-80 kwaye ungakufumanisa kunzima ukwenza isigqibo ngombala othile ngaphakathi komfanekiso. Ngokuzithoba, i-fosahetsengcops.com iphumeze isixhobo sokukhetha imibala ongasisebenzisa nangaliphi na ixesha xa ufuna.
Xa ungenisa kwaye ulayisha ngesixhobo esikwi-intanethi, siya kulayisha ukufunyanwa koluhlu lwemibala ngaphakathi. Ngolwazi, iziphumo zineenkcukacha ezithile eziluncedo njengomfanekiso wombala, HEX, RGB, kunye negama lombala ngokunjalo. Le yindawo entle njengoko unokubona inqwaba yemibala ngaphakathi kwemizuzwana ngesixhobo. Ke, Yonwabela ukubona imibala efihliweyo kwigalari yakho yefoto.
Le webhusayithi ibonakalisa izinto ezininzi malunga nombala kuni nonke. Ngokucofa nje kube kanye kule webhusayithi, unokufumana imifanekiso emininzi oyifunayo. Nazi ezinye zeziqulatho onokuzifumana
Inye imalunga nombala. Kukho imibala esisiseko, imibala yokudibanisa, ubungakanani bemibala kunye negama lombala. Umbala osisiseko unemibala emithathu, kukho obomvu, luhlaza okwesibhakabhaka kunye nobutyheli. Ukusuka kumbala osisiseko, unokufumana imibala emininzi yokudibanisa ekuphefumlelayo nonke, oko kukuthi imibala yesibini. Umzekelo, ukudityaniswa okubomvu kunye nokuphuzi kuya kuvelisa umbala oluhlaza okwesibhakabhaka, ukudityaniswa okutyheli kunye nohlaza okwesibhakabhaka kuya kuvelisa umbala oluhlaza, okokugqibela bubomvu kwaye ukudityaniswa kweblue kuya kuvelisa umbala omfusa.
Ngelixa enye indibaniselwano yombala iya kuvelisa umbala ongaphezulu kwezigidigidi. Umbala wohlulahlulwe wangamaqela amabini, oko kukuthi imibala efudumeleyo kunye nemibala epholileyo. Imibala efudumeleyo sisiphumo sokuphela kwemibala ebandayo. Imibala efudumeleyo yenza ukuba izinto zibonakale zinobunzima kwaye zixinene. Imibala efudumeleyo ibomvu, iorenji, igolide kunye ne-brown. Ngelixa imbonakalo yombala opholileyo yenza izinto zibonakale zintsha kwaye ziqaqambile. Zidityaniswe kwimibala epholileyo luhlaza, onsomi kunye neluhlaza okwesibhakabhaka.
Ukudibana kwemibala sisiphumo sobuchule bomntu kunye nombono. Imibala eyahlukileyo inombono owahlukileyo kumntu. Ukudibanisa imibala kwenza ubomi bube ntle ngakumbi kwaye bube buhle. Ngaphezu koko, ukudityaniswa kwemibala kunokuvelisa umbala omangalisayo. Unokufaka ukudibanisa umbala kwizinto ezijikeleze thina, njengaseludongeni, umbala wefanitshala, Ukukhetha imibala kwempahla, imibala yokupeyinta, umhlobiso njl.